About Us - Shandong Lu Young Machinery Co., Ltd
Shandong Lu Young Machinery Co., Ltd. yakatangwa muna Chikunguru 1996. Isu tiri munzvimbo shandong provice.Takaunza kunze tekinoroji yekugadzira uye R&D timu kubva kuKorea muna 2001 uye tinovaka fekitori yedu yechitatu yekugadzira muchina weswiss lathe.Tinogona kugadzira pamusoro pe1000 seti cnc muchina midziyo gore rimwe.Yedu cnc muchina maturusi akatengeswa kunze kwenyika dzinopfuura makumi mana uye kuwana mhinduro yakanaka.
Isu tine vangangoita mazana mashanu evashandisi uye makumi mana mainjiniya, anopfuura mazana mashanu㎡ anoshanda chitoro nzvimbo uye 1000㎡hofisi nzvimbo.Chikwata chedu cheinjiniya chine zviitiko zvakapfuma zvekusarudzwa kwemidziyo uye dhizaini dhizaini, isu tinogona kukupa iwe nyanzvi mhinduro zvichienderana neako workpieces nekukurumidza uye zvakasununguka.
Yese yemuchina wedu weCNC wanoenderana neISO yepasirese kodhi chiyero, uye inovavarira budiriro ine mukurumbira, uye chinangwa chevatengi kutanga.Kuwana zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, sevhisi ine hanya, kuendesa nenguva, mitengo inonzwisisika, uye kupa vashandisi kuita kwakanaka Zvigadzirwa, kambani inofarirwa nevatengesi nevashandisi kumba nekune dzimwe nyika ine mukurumbira wakanaka uye sevhisi yakanaka.
ZVINOTAURA 20 YEARS PROFESSIONAL AKATARISA ON CNC MACHINES
Shandong Lu Young Machinery Co., Ltd. yakagadzwa muna Chikunguru 1996, iri muShandong provice.Yakaunzwa kunze tekinoroji yekugadzira uye R&D timu kubva kuKorea muna 2001. Yakatengeswa kunze kwenyika dzinopfuura makumi mana uye kuwana mhinduro yakanaka.Michina yese yakapfuura European Union CE kusimbiswa uye yakasimbiswa kune ISO 9001.
Kambani yedu ine anopfuura makumi mashanu emuchina modhi, anosanganisira flat bed uye inclined bed CNC lathe, 3-axis, 4-axis, 5-axis CNC milling muchina, siwss type cnc lathe muchina, wakajairika lathe, sawing muchina.
1. High quality configuration
Zvinhu zvikuru zvinotengeswa kunze kwenyika kana zvepamba zvine mukurumbira mhando, seyeJapan FANUC system, yeJapan NSK inotakura kana yeGerman FAG inotakura, yeGerman Siemens controller system, French Schneider, Taiwan ROALY spindle, OKADA auto chishandiso chekuchinja, Taiwan Hiwin mutsara wegwara nzira, GSK controller. system etc.
2. Yakasimba R&D Simba
Tine makumi mana mainjiniya munzvimbo yedu yeR&D, vese vane ruzivo rwakanyanya mundima iyi.
3. Kudzora Hunhu Hwakasimba
Pane zvinhu makumi mana neshanu zvekuongorora uye zvekuyedza, maawa makumi mana nemasere ekugadzirisa bvunzo yekuongorora-yakazara-stroke, uchishandisa epamusoro-soro midziyo yekuyedza senge matatu-anoronga ekuyeresa muchina, yeBritish ERNISHAW laser F interferometer, uye yeJapan SIGMA ine simba yekuenzanisa. ive nechokwadi chekutonga chaiko kwezvese ruzivo rwemuchina chishandiso.
Customized configuration, kutaridzika kunowanikwa.Tinokugamuchirai kugovera zano renyu nesu, ngatishandei pamwe chete kuti tiite kuti hupenyu huve hunyanzvi.
Zvigadzirwa zvedu zvese zvinopasa CE Certification, uye fekitori yedu inopasa ISO9001 Quality Certification.Michina yedu yakatengeswa kunze kwenyika dzinopfuura makumi mana.Tinogamuchira vatengi vese uye shamwari dzinouya kuzoshanyira fekitori yedu!
Nezvesimba rehunyanzvi, isu tine hunyanzvi hwekutsvagisa nekusimudzira vashandi, vanogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana pane tekinoroji nekugadzira.Isu tinobvuma gadziriso yetsika, tinogona kugadzira muchina maererano nechikumbiro chako.Kana iwe uine chero chakakosha chikumbiro, nyanzvi yekugadzira timu inogona kukupa iwe yakanyatso kurongeka imwe neimwe.
Zvekutengesa ivo vese vatengesi vane hunyanzvi vanogona kukubatsira kugadzirisa matambudziko pakutenga uye tekinoroji ine chekuita neCNC maturusi nemichina yekuyedza.Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kumba nekune dzimwe nyika, uye zvinozivikanwa zvikuru pasi rose.